Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Poland » Poland na -akwado ịkwalite ngalaba njem ya
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Poland na-atụgharị na ebe dị mma maka ndị njem na-eto eto na-enwebeghị ike ịnweta njem na-enweghị mgbochi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ.
Poland bụ ebe a na-eme njem otu afọ nke na-enye ahụmịhe dị ịtụnanya na uru a na-apụghị imeri emeri ma e jiri ya tụnyere ndị ibe ya na Europe.
N'ihe karịrị ọrụ nkwalite ụlọ nkwari akụ ọhụrụ iri isii na isii ka emebere na 62 n'ihi mmeghe ya na 35, Poland na-ebute ụzọ n'ịkwalite uto njem ya na oge ajọ ọrịa.
Obodo Poland na -agwakọta oghere obodo mepere emepe na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ nweghị obodo na -eme nke a karịa Warsaw.
Site na ọkwa na a na -eme ka usoro ọkụ okporo ụzọ njem mba ofesi dị mfe na England na otu ndepụta ọbara ọbara site na Ọktọba nke anọ, ezumike na Poland, otu ebe kacha mma na Europe maka ndị njem na -eto eto, amalitela.
Na -amalite na 4 Ọktoba, ọkwa ahụ pụtara ndị mmadụ na -alọta Poland agaghịzi na -anọpụ iche na nkwari akụ, ma ọ bụrụ na mba ahụ esoghị na ndepụta ọbara ọbara. A gaghịzi achọ nnwale PCR maka ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke na-alaghachi England, na n'okpuru usoro nnwale ọhụrụ, ndị nwere ọrụ abụọ agaghị mkpa ịnwale ule tupu ọ pụọ tupu ịhapụ obodo ọ bụla na-anọghị na ndepụta ọbara ọbara.
Site n'ụsọ osimiri Baltic mara mma nke nwere aja aja ọcha na -acha ọcha, na -atọ ụtọ UNESCO-oke ọhịa echekwara na ugwu Tatra titanic ruo ọtụtụ obodo juputara na akụkọ ntolite, oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ihe nketa ọdịbendị bara ụba, Poland bụ ebe a na-eme njem otu afọ nke na-enye ahụmịhe dị ịtụnanya na uru a na-apụghị imeri emeri ma e jiri ya tụnyere ndị ibe ya na Europe. Ihe ndị a na-eme Poland ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka ndị njem ahụ na-eto eto na-enwebeghị ike ịnweta njem na-enweghị mgbochi ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ.
N'ihe karịrị ọrụ nkwari akụ ọhụrụ 62 ka emebere atụmatụ na 35 ga -emepe na 2021, na -ebute ọnụ ụlọ ọhụrụ 7,422 Poland, obodo a na-ebute ụzọ n'ịkwalite uto njem nlegharị anya ya n'oge ajọ ọrịa. Site na ime obodo gaa njem nlegharị anya, n'ime ọnwa Julaị a, UNESCO kwupụtara na e nyela oke ọhịa beech nke ochie na Primeval bekee ọnọdụ ụwa. Osisi Ochie nke ndị Carparthian gbasara ọtụtụ mba, ngalaba Poland bụ ogige mba ụwa nke Bieszczady.
Ebe ezumike obodo kacha mma na Europe maka ndị njem na -eto eto
Na -emikpu onwe gị na Krakow, isi obodo ọdịbendị Poland
Krakow na -apụta dị ka otu n'ime ebe ezumike obodo Europe nke mbụ, yana ezi ihe kpatara ya. Obodo a nwere usoro ihe nketa ụwa, ya na Old Town, Wawel Castle na Kazimierz district niile so na ndepụta UNESCO World Heritage. Krakow bụkwa onye bụbu Isi Obodo Omenala Europe, na-enwe ihe karịrị otu narị mmemme na ihe omume ọdịnala ama ama n'ụwa niile na-eme ebe a kwa afọ. Ị ga -ahụkwa otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mkpokọta ihe ngosi nka niile dị n'obodo ahụ. Dị ka a ga -asị na nkwanye ugwu ndị a ezughi iji rafuo gị, obodo ahụ abụrụla isi obodo Europe nke Gastronomic Culture. Ị ga -ahụ ngụkọta nke ụlọ oriri iri abụọ na isii na -ejide Michelin ebe a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke Gault & Millau kwanyere ugwu. Site na nri dị mma ruo ndị osi nri ama ama n'ụwa, ọnọdụ nri Krakow bara ụba na iche iche.